Premier League Oo Hakiyay Kulan Saddexaad oo Horyaalka laga Ciyaari lahaa | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Premier League Oo Hakiyay Kulan Saddexaad oo Horyaalka laga Ciyaari lahaa
Premier League Oo Hakiyay Kulan Saddexaad oo Horyaalka laga Ciyaari lahaa
Maamulka Premier League ayaa shaaciyey in ciyaartii saddexaad oo toddobaadkan la dheeli lahaa horyaalka loo baajiyey sabab la xidhiidha Fayraska Korona iyo dhaawacyo sababay in mid ka mid ah kooxuhu ay weydo ciyaartooyo ku filan.
Khamiistii ayuu Premier League ku wargeliyey kooxaha Liverpool, Leeds United, Watford iyo Wolves in aanay ciyaari doonin kulamadoodii Axadda, taas oo ka dhigan in Liverpool aanay usbuucan la ciyaari doonin Leeds United, sidoo kalena aanay Watford safar u geli doonin Watford.
Horyaalka Premier League ayuu kusii faafayaa Fayraska Korona, waxaana shaki la gelinayaa tiro ciyaaro ah iyadoo horena ay kooxuhu kulamo ay yeesheen ay isku af-garan waayeen inay gebi ahaanba fasax ka galaan ciyaaraha toddobaadkan.
War-saxaafadeed uu soo saaray Premier League ayaa waxa uu ku sheegay in kulankii Axadda ay ku ballansanaayeen Everton iyo Burnley la baajiyey oo waqti kala loo muddayn doono oo la baajiyey, kaddib markii ay sidaas codsatay Liverpool oo ciyaartooyo badan uu kaga dhacay Fayraska Korona, kuwo kalena ay dhaawacan yihiin.
“Bopodhka sare ee maamulka Premier League waxa uu saaka go’aamiyey in kooxaha iyo taageereyaasha uu u caddeeyo, in kulankii Burnley iyo Watford la baajiyey.” Ayuu Premier League ku yidhi war-saxaafadeedkiisa.
Everton ayaa safar ku tegi lahayd Turf Moor hase yeeshee waxay diiwaan-gelisay dersin ciyaartoydeeda ah oo uu ku dhacay Fayraska Korona iyo kuwo kale oo dhaawacyo kaga maqan, taas oo aan suurtogal ka dhigayn inay ciyaaraan.
Tababare Rafa Benitez ayaa hore u yidhi: “Dhibaatadayadu waxay tahay in aanu haysano sagaal ciyaartoy oo gudaha ah oo kaliya, iyo saddex gool-haye, taasina waxay sababtay in aanu u yeedhno shan ciyaartoy oo da’yar ah oo aan xataa 21 jir gaadhin.”
Xiddigii Pep Guardiola albaabada ka xidhay, isla markaana Diiday in uu xataa la kulmo ee Pedro Porro oo ka Wareegay Manchester City
Halyeyga England ee Gary Neville oo Magacaabay Difaaca ugu fiican Horyaalka Premier League
Tottenham Hotspur oo Heshiis la soo saxiixaneysa Cristian Romero, Dejan Kulusevski
Chelsea oo ka fikiraysa inay u Dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Casemiro?
Liverpool iyo Chelsea oo isha ku Haaya Xaalada Eddie Nketiah
Aadan Madoobe iyo Shariif Cabdalla oo dhabar jabin ku sameeyey Lafta...
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa weli wada bixinta shahaado siinta xildhibaan cusub ee dhowaan la soo doortay, wuxuuna...
Wararka Suuqa Kala iibsiga Maanta: Pogba oo Koox Cusub ku biiraya...
Maxay tahay shirkadda loo saxiixay shidaalka SOOMAALIA?